/blog/gallery/The Best Nootropics Aniracetam Powder for Enhancement Enhancement
Ihe na 05 / 30 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Ihe niile gbasara Aniracetam ntụ ntụ
1.What bụ Aniracetam ntụ ntụ?
2.What bụ Aniracetam Powder eji mee? 丨 Aniracetam Nshoputa mmetụta
3. Kedu ka Aniracetam Powder si arụ ọrụ?
4.What bụ ọkara ndụ nke Aniracetam Powder?
5. Aniracetam Ntụ ntụ mmiri soluble?
6.What bụ ihe kasị dị irè Nootropic?
7. Aniracetam ntụ ntụ
9.Aniracetam Powder mmetụta utịp
Ahụhụ onye ọrụ nsonye 10.Aniracetam
11Wụ ka ịzụta ihe kasị mma Nootropics Aniracetam Ntụ ntụ maka mmụkwu nke akpọrọ.
1. Kedu ihe Aniracetam ntụ ntụ?
Nootropics Aniracetam ntụ ntụ, CAS No.72432-10-1, bụ otu okwu na ezinụlọ racetam, nke e mepụtara mgbe piracetam. N'ihi na Aniracetam rwa Powder abanye n'ọbara ngwa ngwa, a maara ya dịka racetam kachasị mma nke nwere ike melite ncheta, cognition yana ime ka obi dịkwuo mma.
Aniracetam Powder makwaara dị ka 1-p-anisoyl-2-pyrrilidinone, Ro 13-5057, CAS 72432-10-1, 1 (4-methoxybenzoyl) -2-pyrrolidinone. Adịla mgbagha na Piracetam ntụ ntụ.
Ọ bụ ezie na ole na ole Aniracetam raw nkuzi ntụ ntụ karịa piracetam ntụ ntụ, e nwere ihe akaebe na-atụ aro Aniracetam Powder nwere ike inye aka na creativity na mkpakọrịta dị elu n'etiti echiche (dị ka itinye ihe mgbagwoju anya).
Aniracetam Powder bụ ihe pụrụ iche n'ihi mmetụta pụrụ iche nke mmetụta uche. Ngwurugwu ahụ na-ebelata nchekasị site na mmekọrịta ya na serotonin, dopamine, na choline receptors. E wezụga nchegbu, e nwere ihe àmà na-egosi na ọ nwere ike ịbụ ụdị ọzọ maka ịda mbà n'obi, nke a na-ekwu na ọ bụ usoro isi ihe (otu o si arụ ọrụ!)
A na-atụle nke ọma na ọ dị irè, Aniracetam raw Powder bụ ụlọ ọrụ na-ewu ewu nke na-ewu ewu nke ukwuu site na nchọpụta na njedebe na obodo na afọ ndị na-adịbeghị anya.
2. Kedu ihe bụ Aniracetam raw Ntụ ntụ eji?Aniracetam ntụ ntụ
Aniracetam raw A na-ekewa ntụ ntụ dị ka amịpị nootropic na klas Racetam. Ọ bụ otu n'ime ọgwụ ndị kachasị ike na klas ahụ, ọ naghị enwetakwa mmasị na Europe (gụnyere ịnweta ọgwụ dịka ọgwụ ọgwụ), ma FDA adịghị anabata ya na United States.
A kọrọ na Aniracetam Powder na-eme ka ọganihu dị ukwuu na-arụ ọrụ na ikike. A na-eme ka nke a dịkwuo mma site na mmetụta ya na ebe nchekwa cheta na, ma eleghị anya, ihe ka mkpa, mmetụta ya dị elu na-amụta. Iji gbakwunye na nke ahụ, e gosipụtara ọgwụ ahụ dị ka ihe na-echegbu onwe ya, ọgwụ na-enyere aka belata nchekasị.
Nke a bụ anya serial uru nke Aniracetam raw ntụ ntụ (Aniracetam raw ntụ ntụ uru / Aniracetam ntụ ntụ utịp):
1) Aniracetam Powder nwere ike meziwanye enweghi ike
Ọtụtụ ọmụmụ ihe mbụ gosiri na Aniracetam raw Powder nwere ike ịba uru nye ndị nwere mmerụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, nchọpụta 2012 nke a bipụtara na CNS Neuroscience & Therapeutics chọpụtara na ịgwọ ndị okenye meworo okenye na Aniracetam Powder maka otu afọ mere ka enwee ọganihu dị mma n'ọrụ. Na-emetụta ndị agadi 276 nwere nsogbu uche, nchọpụta ahụ chọpụtakwara na Aniracetam raw Powder nwere mmetụta bara uru na ọnọdụ obi ụtọ na mmetụta uche.
Tụkwasị na nke ahụ, nnyocha dabeere na nkedo bipụtara na Psychiatry na Clinical Neurosciences na 2000 chọpụtara na Aniracetam raw Powder nwere ike inye aka na-emeso nsogbu ụra nke metụtara nkwarụ.
2) Aniracetam Powder nwere ike ime ka ụra dị mma
Aniracetam ntụ ntụ weghachiri ụra na-ada ụra na ụra ehihie na-ehi ụra mgbe ụbọchị ise gasịrị na ụkwara ọrịa strok. Mkpụrụ nchịkwa gosipụtara ụra REM na-ehi ụra n'ụbọchị na oké ụra na-abụghị ụra n'abalị.
3) Aniracetam Powder nwere ike ime ka nchegbu dịkwuo mma
Aniracetam ntụ ntụ nwere ike inyere aka n'ịgwọ ọrịa nchegbu, dị ka otu 2001 bipụtara na European Journal of Pharmacology. N'ile ule na ụmụ oke, ndị nchọpụta chọpụtara na Aniracetam raw Powder nwere ike inye aka belata nchekasị site na emetụta ọtụtụ ndị neurotransmitters (otu klas nke kemịkal gụnyere n'ibu ozi site na mkpụrụ ndụ nerve na mkpụrụ ndụ ndị ọzọ).
4) Aniracetam Powder Nwere Ike Inyere aka na Iweghachite Mmebi
Aniracetam Powder gbanwere mmetụta nke ọrịa nwa ebu n'afọ na-eto eto site na ịba ụba nke ndị na-anabata AMPA na hippocampus.
Na ọmụmụ ihe na ụbụrụ ụbụrụ nke ụmụ oke ụmụ, Aniracetam raw Powder na-eme ka ọganihu nke neurons dịkwuo elu. Nke a na-egosi Aniracetam Powder nwere ike inwe ụbụrụ ụbụrụ na-arụzi mgbe ọnyá ụbụrụ na-emebi ọnyá nke na-emebi ọgbụgba njikọ.
Aniracetam raw Ntụ ntụ mere ka enwekwuwanye ike n'ime eriri ụlọnga na oke na ọbara na-egbochi ụbụrụ, nke mere ka anụ ahụ mebiri emebi ma mee ka ụbụrụ na-arụ ọrụ. Nke a bụ n'ihi mweghachi nke ụzọ ntangọ ndị a kwụsịrị site na igbochi ọbara na-erute ụbụrụ.
Aniracetam Ntụ ntụ na-edozi omume na ebe nchekwa na oke na enweghi ọbara na-eru ụbụrụ na ikpughe na gas nitrogen buru ibu.
Aniracetam raw Ntụ ụba na-aṅa ntị nke ọma na ụdọ nke chemical a na-akpọ apomorphine.
N'ịgba aghara, Aniracetam Powder belata omume na-adọpụ uche ma dọpụ uche n'emeghị ka ezi nhazi ma ọ bụ ọsọ na nyocha nke anụ ahụ site na mgbanwe nke ndị na-anabata AMPA na ụbụrụ na-egosi mmụba na-elekwasị anya.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị usoro niile nke usoro ọrụ ya ka a ghọtara kpamkpam, Aniracetam raw Powder amụwo ọtụtụ ihe, ọ gosipụtakwala iji dozie ihe ndị dị mkpa dị mkpa nke neurotransmitters:
Acetylcholine - Aniracetam Powder mma cognition site na ime ka ọrụ dum acetylcholine usoro, nke na-arụ ọrụ dị mkpa na ebe nchekwa, oge nlebara anya, ọsọ mmụta na usoro ntụgharị uche ndị ọzọ. Ọ na-arụ ọrụ site n'aka ndị nabatara acetylcholine, na-egbochi nkwụnye ihe nkwụnyeghachi ma na-akwalite nkwenye synaptic nke acetylcholine.
Dopamine na Serotonin - Aniracetam raw Ntụ ntụ na-eme ka ọnọdụ dịkwuo mma, na-eme ka ume dịkwuo elu, na-ebelata nchekasị site n'ọganihu nke dopamine na serotonin. Site na ejiri ya na dopamine na serotonin na-anabata ya, Aniracetam Powder na-egbochi mmebi nke ndị a dị mkpa neurotransmitters ma weghachite ogo dị elu nke abụọ ahụ, na-eme ka ọ bụrụ onye na-eme ka ahụ dịkwuo mma na onye na-eche nchegbu.
Glutamate Transmission - Aniracetam raw Powder bụ ihe dị irè iji melite ebe nchekwa na nchekwa data n'ihi na ọ na-eme ka mmelite nke glutamate na-ebuwanye ibu, bụ neurotransmitter nke na-arụ ọrụ kachasị n'ime mmechi mmechi. Site n'igosi ma na-akpali akpali ndị na-anabata AMPA na ndị na-anụ ọkụ n'obi, ndị na-anabata glutamate nke jikọtara ya na nchekwa data na imepụta ihe ncheta ọhụrụ, Aniracetam Powder na-eme ka enweghi neuroplasticity n'ozuzu na ogologo oge.
4. Kedu ihe ọkara ndụ nke Aniracetam Powder?
The ọkara ndụ nke Aniracetam ntụ ntụ bụ 1 ka 2.5 awa
Aniracetam Powder bụ abụba-soluble, Otú ọ dị ọ na-egosi na a ga-eburu ya ọbụna n'ọnọdụ ọnụ. Nri anaghị adị mkpa.
6. Kedu ihe kacha dị irè Nootropic?
1) Aniracetam ntụ ntụ
Aniracetam raw Nzuba bụ otu n'ime ndị kasị pụta ìhè Nootropics-ezinụlọ racetam-nke a mụọla kemgbe ọtụtụ iri afọ. Ndị na-ekpuchi ihe niile na-ekere òkè dị ka "isi"-pyrrolidone-ma na-etinye aka na ngwa ha si na stimulants ka anticonvulsants. Aniracetam Powder karịsịa egosiwo na ọ bụ onye na-ewu ewu na nke dị irè  nke nwere ike ịbụ n'ihi àgwà ya nke ịbụ abụba soluble. A na-ewere uru dị ukwuu nke Aniracetam Powder dị ka nkwalite echiche, dịka mmụba na ikike nchekwa, ike ịmụta ihe, yana ịmepụtawanye mmụba. Aniracetam raw Ntụ ntụ dị n'etiti otu ogige ndị a na-ewere dị ka AMPA Modulators-aha maka ikike ha nwere ike ime ka obi gị nwee ike ịmalite ụzọ. Na asụsụ Bekee; Aniracetam raw Ntụ ntụ na-arụ ọrụ iji nyere aka dozie akụkụ nke ụbụrụ gị nke na-ejikọta na echiche ọsọ ọsọ, na oge mmeghachi omume ngwa ngwa. Ngwá ọrụ a na-atụ aro kwa ụbọchị nke Aniracetam Powder bụ 750mg kwa ụbọchị, were ma nri ma ọ bụ abụba dị ka mmanụ aki oyibo, mmanụ olive, ma ọ bụ butter butter. Ọtụtụ ndị ọrụ na-ekwukwa na a ga-eji ngwaahịa a na Choline supplement, dị ka Alpha-GPC ma ọ bụ CDP Choline iji nyere aka belata ihe ize ndụ nke isi ọwụwa. Aniracetam raw Ọtụtụ n'ime ndị na-ewere ya dị ka inye ike ike dị ọcha, dị ọcha na mmetụta uche dị nro.
2) Noopept ntụ ntụ
A na-ejikọta onyinye a kpọmkwem na ndị òtù Racetam, ma ọ bụghị n'ihi ihe dị iche na nhazi nke mmiri. Otú ọ dị, a na-eche Noopept ntụ ntụ na-eme otu ụzọ acetylcholinic dị n'ime ụbụrụ dịka nchapụta, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime mkparịta ụka. Noopept bụ ihe mgbakwunye ọzọ nke e mebiri na Russia na United States, ma a na-ere ya ugbu a dịka ihe mgbakwunye ihe oriri-ọ bụghị na FDA kwadoro maka ọgwụgwọ ọ bụla ahụike. Na mgbakwunye na ntụgharị uche uche nke ụba nlekota nchekwa, ịmụbawanye mmụta, na mmụba n'ozuzu na cognition nghọta, Noopept na-enyekwa 'mmetụta aghụghọ' psychostimulatory nke nwere ike inye ndị na-achọ ụzọ ọgwụ na-adịghị mma iji kwurịta nchegbu ma ọ bụ ịda mbà n'obi. Data gbasara onyinye a dị iche iche, ụfọdụ na-azọrọ na ntinye 1000 na-abawanye irè ma e jiri ya tụnyere ogige ndị yiri ya dịka Piracetam, ebe ndị ọzọ na-ewere ha abụọ dịka igosi mmetụta yiri ya.
3) J-147 ntụ ntụ
E mepụtara J-147 na 2011, a chọpụtakwa nyocha mbụ na nchekwa dị elu na ụmụ oke ahụ ike na ndị na-ahụ maka Alzheimer, ma jikwa ike chebe ụbụrụ ka ọ ghara imerụ ọzọ. Afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, a chọpụtara na ọgwụ ahụ nwere ọtụtụ uru ịka nká. Ma mgbe ule gosiri na ọ na-arụ ọrụ, ndị nchọpụta amaghị kpọmkwem otú ọ ga - esi mee ya, na iji ọgwụ na - adị njikere maka ule ụmụ mmadụ, ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ị ga - agbanye usoro ahụ.
N'ọmụmụ ihe ohuru, ìgwè ndị Salk hụrụ na J-147 ntụ ntụ na-ejikọta protein nke a na-akpọ ATP synthase, bụ nke na-ahụ maka ịmepụta "ego ike" nke a maara dị ka ATP. A maara protein a ijikwa ịka nká na ikpuru na ijiji, ndị na-eme nchọpụta chọpụtakwara na site n'ịnyere ya aka, ọgwụ ahụ gbochiri ụbụrụ nke ụbụrụ na-emebi ụbụrụ.
Ngwá ọgwụ kachasị mma maka Aniracetam Powder (Aniracetam raw Njikere ntụ ntụ) yiri ka ọ dị n'agbata 750 mg na 1500 mg. Ọ bụrụ na ị na-eri ya n'okpuru ọgwụ a, ọ gaghị ezuru uru iji kwado ya. Otú ọ dị, oriri n'elu ego a nwere ikike dị ukwuu maka mmetụta ndị dị na ya ma belata mmetụta dị mma. N'ikpeazụ, ị ga-anwale dị iche iche doses nke Aniracetam raw Powder iji nweta ego kwesịrị ekwesị nke ga-adabara gị.
Dị ka ọtụtụ racetams, Aniracetam Powder na-arụ ọrụ nke ọma n'onwe ya ma ọ bụ na ya na ndị ọzọ nootropics. Ndị a bụ ụfọdụ Aniracetam raw ntụ ntụ na-atụle.
1) Aniracetam Powder na Choline Stack
Ihe mgbakwunye nke choline nke ihe na-emekarị ka akwadoro mgbe ị na-ewere racetams, dị ka Aniracetam Powder. Choline, ihe oriri dị mkpa nke anyị na-eri na nri anyị, bụ ihe na-aga n'ihu na acetylcholine neurotransmitter bụ nke nwere ụbụrụ dị iche iche dịka nchekwa.
Ịgbakwunye ihe dị elu, ihe na-adịghị emepụta ihe ndị ọzọ, dịka alpha GPC ma ọ bụ citicoline, nwere ike inwe mmetụta nchịkwa n'onwe ya site n'ịhụ na e nwere ụlọ dị mkpa maka synthesizing acetylcholine.
Usoro a dị ezigbo mkpa mgbe ị na-ewere Aniracetam raw Powder ebe ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ n'akụkụ ụfọdụ site n'ịkpalite usoro cholinergic. Mgbakwunye choline kwadoro na e nwere ezuru na usoro gị iji mee ka mmetụta Aniracetam Powder dị elu ma na-ebute mmetụta ndị ọzọ nwere ike ime ka ọ bụrụ enweghị acetylcholine n'ime ụbụrụ dịka isi ọwụwa.
2) Ogwe PAO
Ogwe PAO, mgbakọ nke piracetam, Aniracetam raw Powder, na oxiracetam, bụ ihe nchịkọta dị iche iche nke gụnyere ijikọta atọ ndị a na-ewu ewu. Ịkwado Aniracetam Powder na piracetam na oxiracetam na-ewusi mmetụta nke ngwongwo nile ahụ na nchịkọta ma nwee ike ịgbatị oge nke uru ndị ahụ nwere. Tinyere piracetam nwere ike ime ka Aniracetam dị arọ ntụpọ na-adịghị mma na mgbochi nchegbu. Dịka e kwuru na mbụ, ọ bụkwa ezi echiche ịnye ihe ndekọ choline.
Tupu ị nwaa nchịkọta a mgbagwoju anya, a na-atụ aro na ị nwere ahụmịhe na onye ọ bụla nke nchịkọta ahụ tupu ijiko ha. Naanị tụlee nchịkọta a mgbe ị maara ihe ọ bụla ha na-eme na otú i si eme ha. Chetakwa mgbe ijikọta racetams, ma ọ bụ nootropics n'ozuzu, ị ga-eji ihe na-erughị ka ị na-emekarị ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụ nke ha n'ihi na ọtụtụ nootropics nwere mmetụta synergistic.
9. Aniracetam ntụ ntụ mmetụta utịp
Ihe kachasị emetụta Aniracetam Powder bụ nchekasị, ụfụ, na ehighi ura. Mmetụta ndị ọzọ dị na nrịba elu dị elu gụnyere isi ọwụwa, vertigo, afọ ọsịsa, na mgbatị siri ike
10. Aniracetam Ntụ ntụ ahụmahụ onye ọrụ
N'ịgbaso ndụmọdụ ndị dị na ya, David na-ekpuchi mpi 750 mg. Mgbe naanị otu elekere, ọ malitere ịmalite inwe mmetụta aghụghọ nke ịnọ n'isiokwu ma tinyekwuo uche. Na mbụ, ọ na-ekwu na ọ maghị na ọ bụ ọgwụ, ma ọ bụ mmetụta, n'agbanyeghị nke ahụ.
N'ihe dị ka awa abụọ, David kọrọ ụfọdụ nchọpụta dị mma. Ọ na-amata na ọ na-eche na ọ na-enwe mmetụta na enweghị ike. Ọ na-awụli ọrụ site na ọrụ, na ihe ọ na-akpọ "iwe ọkụ ọtụtụ." Ọ bụ ezie na ọ naghị eche na ọ dị njọ, ọ dịkarịa ala dị egwu, ma ọ dị mkpa ịkọ. N'ụzọ dị nro, ọ dịghị ihe ọjọọ ọ na-agụ na agụụ ya, ebe ọ na-agbadata almọnd mgbe ọ na-edekọ ihe omume ahụ.
Ọkara na ọkara awa na David nwere nnukwu akụkọ. Ọ na-eche na ọ nọgidere na-elekwasị anya na mmasị na ihe ọ na-eme. Ọ bụghị 100% kwenyesiri ike na ọ bụ Powder Aniracetam nke mere ka ọrụ ahụ dị irè, ma ihe ndị a rụpụtara dị oke mkpa na ọ na-akpọ nnwale ahụ na-aga n'ihu na 1, ọ ga-enyekwa aka inye onye ọzọ n'ọdịnihu dị nso.
11. Ebee ka ịzụta ihe kasị mma Nootropics Aniracetam Ntụ ntụ maka mmelite obi
Nootropics bụ, ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ mgbakwunye dịka mmanụ na magnesium, mara mma ma sie ike ịchọta n'ọtụtụ ọnọdụ. Enwere ike ịchọta ọtụtụ ihe ndị na-emepụta ọgwụ na nchịkwa Nootropics na ụlọ ahịa nri ahụike gị, na ntanetị, ma ọ bụ na ọ bụ ọbụna ụlọ ahịa nri dị ka Food Whole. Dịka usoro mkpịsị aka n'ozuzu, ndị a abụghị ụdị mmezi kachasị mma dịnụ ma nwee ike ịnwe ọtụtụ ihe nwere ike ime, ihe ndị na-achọghị, na ọbụna ndị na-agụghị akwụkwọ na ụfọdụ. Ịntanetị bụ oge kachasị mma maka ụdị ngwaahịa ndị a, ma ụdị mma dị mfe ịchọta. N'agbanyeghị nke ahụ, site na ụfọdụ n'ime ihe ndị na-emepụta ihe, nke dị ike Nootropics-ọ ka nwere ike isi ike ịgbaso ha. Ọ dabara na, na nhụsigharị na nso nso a na ewu ewu nke gbara gburugburu Nootropics, e nweela ọtụtụ ahịa ere ahịa na-ahụ maka Nootropics.
AASraw bụ ụlọ ọrụ raara onwe ya nye onyinye, nkọwa, na onyinye efu na-enweghị atụ nke na-egbo mkpa dị elu nke ndị ọkachamara na-arụ ọrụ dị egwu dịka mmemme na injinia. N'ịwapụ onwe ha n'ọtụtụ asọmpi ahụ, AASraw Nootropics ntụ ntụ na-adị ọcha na-erughị 98%. Nraranye a maka ịdị ọcha na-enye ikikere ngwaahịa AASraw iji hụ na o nwere ike iji oke ọ bụla.
AASraw na-enye ọtụtụ mmadụ Nootropics ntụ ntụ ngwaahịa, yana ọtụtụ ihe ndị ọzọ steroids (ihe aasraw), ntụpọ nke hormone na-emepụta, ntụpọ nke hormone na-egbu egbu, ugbo SRMAS ... na nke ọzọ. nakwa. Na mgbakwunye na ntinye aka ha dị mma, AASraw na-enye ọrụ nnyefe ọsọ ọsọ na nke n'enweghị nsogbu. Karịsịa USA, AASraw na-enye nnyefe ụlọ na United States. Ma ọ pụtaghị inwe ngwaahịa na USA. Nke a pụtara, AASraw nwere onye na-enyefe ndị na-enyefe ego na USA, mgbe ị na-enye AASraw iwu, a ga-ezigara ngalaba gị na AASraw delivery agent na USA mbụ, wee zigara na adreesị gị mgbe emechara njedebe omenala. Onye na-enyefe ndị na-azụ ahịa AASraw ga-edozi usoro nkwụsị nke omenala, ọ dịghị mkpa ka onye ahịa nweta ozi. Ya mere, ọ nweghị mmetụta ọbụla na nchekwa adreesị gị tupu emezigharị omenala iwu.
Ihe niile I Kwesịrị Ịmara Tupu Ịzụta LGD-2226 Powder	Zụrụ dịka Ntanye CRL-40,940 (BisfluoroModafinil) dị ọcha